Sida loo Gooyo & loo adkeeyo Decking iskudhafan
Sida sawirka sare ka muuqata, laga yaabee in deegaankaagu la mid yahay sidan oo kale, waa wax aan caadi ahayn oo waxaad dooneysaa inaad ugu qaabeyso qaab muuqaal ah laakiin WPC decking warshaddu marwalba waxay kuu sheegaysaa inay soo saari doonaan hal ama labo shey oo cabir iyo dherer ah. kuwan, waxaad u maleyn kartaa ...
Qaar ka mid ah Talooyinka Ku Saabsan WPC
Waxaa qoray admin on 21-07-06
Waxyaabaha isku dhafan ee caaga ah (WPC) waxay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka alwaaxda iyo polymer-ka labadaba, laakiin way ka madax bannaan tahay cilladooda. iyo madal kale oo banaanka ah Iyadoo sidaas nin ...
Miyuu rinjiyeyn karaa WPC?
Waxaa qoray admin on 21-06-09
WPC decking waa gaaban yahay balaastigga alwaaxda iyo qurxinta isku dhafan, waa mid aad iyo aad uga caansan adduunka oo dhan.Marka aan qeexno decking-ka isku-dhafka ah, waxaan marwalba dhahnaa decking-ka WPC maahan wax rinjiyeyn ah, ma jiro xabag, dayactir hooseeya. Miyaa la rinjiyeyn karaa looxyada WPC?
Nadiifi oo dayactir qashinka WPC
WPC decking wuxuu leeyahay faa iidooyin badan marka loo eego sagxada adag ee soojireenka ah hadana wuxuu noqdaa mid caan ah oo sii kordheysa.Laakiin ma jiraan wax isku dhaf ah oo WPC ah oo 100% dayactir la'aan ah. sidoo kale nabarrada ku yaal ...
Tilmaamaha Rakibaadda ee WPC Wall Cladding
WPC waa gaaban balaastigga alwaaxda iyo iskudhafka, waa iska caabbinta cimilada, biyuhu, kahortaga cayayaanka iyo dayactirka oo hooseeya Sababtoo ah awoodo badan oo wanaagsan, dad aad iyo aad u badan ayaa dooran doona gudiga darbiga WPC si ay u qurxiyaan darbigooda. Marka waxaa laga yaabaa in macaamiisha qaar ay ku jahwareeraan rakibaadda, iyo ...
Sida loo rakibo Decking WPC?
WPC Decking waxay ku raaxeysataa faa'iidooyinka alwaax iyo polymer labadaba, laakiin waxay ka xor tahay cilladooda. si fudud loo rakibo ...
Waa maxay wada-bixinta?
Co-extrusion, tiknoolajiyada ugu dambeysa ee xajmiga alwaaxda, tiknoolajiyaddan casriga ah ee casriga ah ayaa si wadajir ah loogu soo koobay xuddunta, qalabkeeda dusha sare leh ayaa ah waxa siinaya guddi kasta waxqabad gaar ah oo ka sarreeya. dusha sare ma ballaarin doono iyo ...
Waa maxay 3D embossed Series?
Lihua WPC 3D Embossed Composite Decking waa sheyga decking tiknoolajiyada cusub, ama waxaad ugu yeeri kartaa qoto dheer xardhan ama super embossed. Tiknoolajiyada ugu weyn waa habka qoto dheer ee la isku qurxiyo inta lagu jiro wax soo saarka. Tiknoolajiyada cusub ee 3D embossing ...
WPC waa wax yar oo ka kooban alwaax isku dhafan, waxyaabaha ugu muhiimsan waa PE iyo fiilooyinka alwaaxda WPC waxay ku raaxeysataa faa'iidooyinka alwaaxda iyo qalabka polymerka Laakiin ka madax banaan cilladooda waa bedel aad u fiican oo alwaax ah. quruxdeeda, macquulnimadeeda ...
Qurxinta WPC, Bannaanka WPC decking, Gogosha WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, alwaax decking isku dhafan, Dabaqa WPC,